Buugii Xaadirinta Xildhibaanada oo la jeexjeexay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Buugii Xaadirinta Xildhibaanada oo la jeexjeexay
A warsame 15 November 2014 15 November 2014
Mareeg.com: Wararka horudhaca ah ee ka imaanaya baarlamaanka Soomaaliya oo saaka loo qeybin lahaa mooshin ka dhan ah R/wasaare C/weli Sheekh Axmed ayaa sheegaya in qaar ka mid ah xildhibaanadu jeexjeexeen Buuga Xaadirinta Xildhibaanada.
Iyaddoo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanku soo xaadireen, islamarkaana la sugayo inuu soo dhameystirmo kooramka Baarlamaanka ayaa la sheegay in xildhibaano ay jar jareen Buugii imaanshiyaha shaqo ee xildhibaanada laga xaadirin lahaa.
Wariyaasha loogu tala galay in ay soo tabiyaan kulanka baarlamaanka iyo wax walba oo halkaasi ka jira, ayaa lasoo sheegayaa in banaanka ay taaganyihiin, gaar ahaan nawaaxiga barxadda Sayidka.
Wixii soo kordha kala soco Mareeg Media
Mooshin ka dhan ah RW Cabdiweli oo mar kale maanta la geynayo baarlamaanka
Baarlamanka Soomaaliya oo markii labaaad buuq ku kala dareeray! (Sawirro)